Usoro Nhicha Mmiri Nke Ụlọ Nyocha
Usoro Nhicha Mmiri Nke Ụlọ Nyocha Purelab Chorus bu usoro nhicha mmiri nke mbu edobere nke oma iji dabara ndi mmadu nlebara anya na oghere. Ọ na-anapụta ọkwa niile nke mmiri dị ọcha, na-enye usoro dị mfe, na-agbanwe agbanwe. Enwere ike kesaa ihe ndị dị na modular n’oge ụlọ nyocha ahụ ma ọ bụ jikọtara ibe ha na usoro ụlọ elu pụrụ iche, belata akara ukwu nke sistemụ. Njikwa nke ndị mmadụ na-enye ọnụego mmiri na-erugharị nke ukwuu, ebe ọkụ ọkụ na-egosi ọkwa Chorus. Teknụzụ ọhụụ na-eme ka Chorus bụrụ sistemụ kachasị elu dị, na -ebelata mmetụta gburugburu ebe obibi yana ụgwọ ọrụ.
Chandelier Nka nka - ihe eji eme ya oku. Ime ụlọ sara mbara nke nwere nnukwu profaịlụ dị ka igwe ojii cumulus. Chandelier dabara na oghere, jiri nwayọ na-asọ site n'ihu mgbidi ruo n'uko. Akwụkwọ ọla edo na enamel na-acha ọcha na njikọta yana ịgbadochi nke ọkpọ ndị dị mkpa na -emepụta onyonyo nke efe efe n’elu ụwa. Otutu ọkụ na ufe na-efe efe nke ọla edo na-eme ka enwe mmetụta sara mbara na ọ joyụ.
Mmemme Ntụkwasị Obi Kaadị Kredit
Mmemme Ntụkwasị Obi Kaadị Kredit Nke a bu ihe eji enyere ego aka na kaadi kaadi ma obu ihe ndi n’enye onyinye nke n’enye onyinye dika ihe omumu nke ikike buru ibu nye ikike igha onye ji ego ya n’ego site na kaadi. ga-agbapụta mgbe ọ na-agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ na ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ mmekọ a. Na nkwughachi maka ikike inyetụ ohere awa, ụlọ akụ ga-eme ka mgbakwunye ụgwọ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ nwee nkwekọrịta. Ebumnuche a bụ ịkwado ndị mmadụ iji nweta ebumnuche agụmakwụkwọ na ngalaba agụmakwụkwọ.
Oghere Mmeghe Maka Ngosipụta Ahia Ahia
Oghere Mmeghe Maka Ngosipụta Ahia Ahia Ihe ngosi nke izizi nke 1900m2 ka achoro, tutu ndi obia nyochaa udiri nche nke mba uwa n'ime 145 nke Salon de TE. Iji jide echiche onye ọbịa wepụtara maka ibi ndụ okomoko na ihunanya, a zụlitere “Deluxe Train Journey” dị ka isi echiche. Iji mepụta ihe nkiri, a na-agbanwe oriri nnabata n'ime isiokwu ọdụ ụgbọ oloko nke ụbọchị ụgbọ oloko nke ime ụlọ nwere mgbede, nke na -eme ka ndụdụ na-ebupụta akụkọ akụkọ. N'ikpeazụ, ebe egwuregwu nwere ọtụtụ arụ ọrụ yana ihe ana - emeghere maka ngosipụta ngosipụta dị iche iche.
Akụrụngwa Na Nkuzi Onye Na-Ahụ Maka Ntụpọ Ultrasonic Nwere Ntụpọ Usoro Nhicha Mmiri Nke Ụlọ Nyocha Chandelier Mmemme Ntụkwasị Obi Kaadị Kredit Oghere Mmeghe Maka Ngosipụta Ahia Ahia